ယမန်နေ့ညပွဲစဉ်မှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အတွက် ​ပရိသတ်တွေကို ​တောင်းပန်စကား ဆိုလာတဲ့ အောင်လအန်ဆန် – Shwe Likes
Shwe | February 26, 2022 | Celebrity | No Comments
မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ အားကစား သူရဲကောင်းတ စ်ယောက်ြ ဖစ်တဲ့ အောင်လအန်ဆန် ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ မနေ့ညက စင်ကာပူ နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship ရဲ့ Full Circle ပြိုင်ပွဲမှာ ရှရှားနိုင်ငံ သား ဗစ် တာလီဗစ်ရှ်နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လက အကောင်းဆုံးေ တာင့်ခံပြီး ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဝမ်းနည်းသစွာပဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ေ တွအတွက် မနေ့ကပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ကြိုး စားခဲ့‌ပေမယ့် ကြိုးစားခဲ့သလို မဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် တောင်းပန်စကား ဆိုလာ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ချစ်ရပါသော မြန်မာ ပရိသတ်များ ခင်ဗျာ
ဒီနေ့ ပွဲအတွက် ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင် ကြိုးစားခဲ့ပါ တယ်။ သို့ပေမယ့် ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့သလို မဖြစ်ခဲ့တဲ့ အတွက် ပရိသတ် များကို စိတ်မေ ကာင်းဖြစ်စေခဲ့တဲ့ အတွက် များစွာ စိတ်မကောင်းဖြ စ်ရပါတယ်။ နောက် များ အတွက် ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးကြိုးစား ပြင်ဆင်သွားပါ မယ်လို့ ဂတိပေးရင်း ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးနဲ့ ပြည်သူပြည်သားများအတွက် အမြဲဆုတော င်းပေးလျက် ပါခင်ဗျာ ။
To my Myanmar fans, I’m sorry I let you down tonight. I did my best to prepare for the fight and was ready but things just didn’t go my way. I promise I will get better. Always praying for Myanmar and keeping you in my heart.” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ ကလည်း ရှုံးရှံးနိုင်နိုင် မြန်မာတစ်ေ ယာက်အနေနဲ့ အမြဲဂုဏ် ယူနေရပါတ ယ်ဆိုပြီး အားပေးထားကြပါတယ်။ Source – Aung La Nsang(Burmese Python)’s FB Acc
ျမန္မာ နိုင္ငံရဲ့ အားကစား သူရဲေကာင္းတ စ္ေယာက္ျ ဖစ္တဲ့ ေအာင္လအန္ဆန္ ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ မေန႔ညက စင္ကာပူ နိုင္ငံမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ One Championship ရဲ့ Full Circle ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရွရွားနိုင္ငံ သား ဗစ္ တာလီဗစ္ရွ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။
ေအာင္လက အေကာင္းဆုံးေ တာင့္ခံၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဝမ္းနည္းသစြာပဲ ရႈံးနိမ့္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေ တြအတြက္ မေန႔ကပြဲမွာ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ႀကိဳး စားခဲ့‌ေပမယ့္ ႀကိဳးစားခဲ့သလို မျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္စကား ဆိုလာ တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
“ခ်စ္ရပါေသာ ျမန္မာ ပရိသတ္မ်ား ခင္ဗ်ာ
ဒီေန႔ ပြဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါ တယ္။ သို႔ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစားခဲ့သလို မျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ပရိသတ္ မ်ားကို စိတ္ေမ ကာင္းျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အတြက္ မ်ားစြာ စိတ္မေကာင္းၿဖ စ္ရပါတယ္။ ေနာက္ မ်ား အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစား ျပင္ဆင္သြားပါ မယ္လို႔ ဂတိေပးရင္း ခ်စ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အျမဲဆုေတာ င္းေပးလ်က္ ပါခင္ဗ်ာ ။
To my Myanmar fans, I’m sorry I let you down tonight. I did my best to prepare for the fight and was ready but things just didn’t go my way. I promise I will get better. Always praying for Myanmar and keeping you in my heart.” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြ ကလည္း ရႈံးရွံးနိုင္နိုင္ ျမန္မာတစ္ေ ယာက္အေနနဲ႔ အျမဲဂုဏ္ ယူေနရပါတ ယ္ဆိုၿပီး အားေပးထားၾကပါတယ္။ Source – Aung La Nsang(Burmese Python)’s FB Acc
ပြည်သူချစ်မင်းသားချော ဒေါင်း ရဲ့ မွေးနေ့ရက်လေးမှာ အမှတ်တရ ကုသိုလ်ပြုလုပ်ေ ပးခဲ့ကြတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပရိတ်သတ်များ
အားကစား လုပ်ရခြင်း အဓိကရည်ရွယ်ချက် အကြောင်းအရင်း ကို ပြောပြလာ တဲ့ မအေးသောင်း
ပရိတ်သတ်တွေ အံ့အားသင့်သွားရတဲ့ Rock အဆိုတော်ကြီး လေးဖြူရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်လေးတွေ